လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် သားငယ် ကိုထိန်လင်းတို့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပြီ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် သားငယ် ကိုထိန်လင်းတို့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပြီ..
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် သားငယ် ကိုထိန်လင်းတို့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပြီ..
Posted by နွယ်ပင် on Nov 23, 2010 in Myanma News, News | 32 comments
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုံးဝလွတ်မြောက်မည်ဟု အပြည့်အဝ ယုံကြည်ကြောင်း ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းပြောဆို
မှတ်ချက် ။ ။ဓါတ်ပုံ -ဒီမိုဝေယ
အီး… ကျုပ်လည်းတင်မလို့ ဘာသာပြန်ပို့စ်နဲ့တွဲတင်မလို့ ညနေထဲက ကြိုးစားနေတာ ပေးမတင်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပထမဆုံးမန်းတဲ့သူဖြစ်အောင်တော့ လုပ်ရမယ်။ အန်တီစုရေ တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။
ဟီး .. ဒါဆို ဦးကြောင်ကြီးထက် လက်ဦးမူရသွားတာပေါ့ … အမှန်က ဓာတ်ပုံတွေက အများကြီးပဲ လိုင်းကမကောင်းတာနဲ့ (3) ပုံတောင် မနည်းတင်ရတာ မနက်ကတည်းက ကြိုးစားနေတာ အခုမှအောင်မြင်သွားတယ် .. လိုင်းကောင်းရင် ကျန်နေသေးတဲ့ ပုံတွေ ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ် ..
nwl လဲ အန်တီစု အတွက်0မ်းသာလွန်းလို့ . mandalaygazette က သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ ဝေမျှချင်တာနဲ့ အမြန်မြန် ကြိုးစားပမ်းစား တင်လိုက်တာပါ (ဆောရီးပါ ဦးကြောင်ကြီးရေ)
ကြည်နူးဝမ်းသာရပါတယ် …..ဒီဆိုက်ကိုမျက်ထောက်နီကြီးနဲ့ကြည့်နေတာဘယ်သူပါလိပ် အော်၁၂၃ကြီးပါလါး စာလုံးပေါင်းမှားယင်လဲခွင့်လွတ်ပါဗျာ ကျွန်တော်တို့က သူငယ်တန်းကိုလေးနှစ်တက်လာရလို့ပါ….
သူများ သားအမိပြန်ဆုံတွေ့တာ မျက်ထောက်နီ နဲ့ ကြည့်ရလောက်အောင် ကိုယ်မရိုင်းဘူး သူငယ်ချင်း။
ဘာပဲပြောပြော စာလုံးပေါင်းတော့ တော်တော်မှန်လာပြီ။
၀မ်းသာတယ် ။အရမ်းဝမ်းသာတယ် ။အကြာကြီးကွဲကွာနေတဲ့သားအမိ ပြန်တွေ့ရတာပီတိဖြစ်တယ် ။ မျက်ရည်တောင်လည်တယ် ။ကိုယ်လည်း ကိုယ့်အမေကိုသတိရတယ် ။မြန်မပြည်ပြန်ချင်တယ် ။
မြန်မာပြည်ထဲက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလည်း လွတ်ပေးပြီး ..မိသားစုတွေပြန်ဆုံနိုင်အောင် ကုသိုလ်ပြုကြပါဦးလို့… ။
ကျန်တဲ့ အကျဉ်းသားတွေ လည်းလွတ်ပါစေ။
သူတို့ကို လွှတ်ပေးဖို့ အဖွားကြီးက လည်း ပျော့ပျောင်းစွာ ချဉ်းကပ်ပြုမူပြီး စစ်တပ်ကို စိတ်လည်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါစေ။
ဝမ်းသာပါတယ် အမေစုရယ်.. နှစ်ပေါင်းများစွာ ကွဲကွာနေတဲ့ သားအမိတွေပြန်ဆုံရတာ အင်မတန်မင်္ဂလာရှိပါတယ်..
မျက်ထောင့်နီနဲ့ကြည့်နေတဲ့အထဲမှာ အရူးချီးပန်းစစ်သည် တစ်ယောက်လဲ ပါလောက်ပါရဲ့..
၀မ်းသာပါတယ်။ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ ကိစ္စလေးတစ်ခုပါပဲ။ ကိုထိန်လင်း လက်မောင်းက တက်တူးလေးက မိုက်တယ်ဗျာ..လိုက်ထိုးဦးမယ်..။
Mayng Dae ပြောတဲ့အရူးချီးပန်းကောင်က အမေ ကို အမေ လို့တောင်ခံစားတတ်ပါ့မလား…သူကပထွေးဘဲခံစားတတ်မှာ..
မေတ္တာတရားတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတာတွေ့ရတော့ အရမ်းပဲကြည်နူးမိတယ်၊ လူသားအားလုံးစိတ်ဆင်းရဲကျဉ်းကျပ်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ပါစေ၊
အသက် ဘယ်လောက် ရှိပြီလဲ ဟင်.. ၄၀ကျော်နေပြီလို့ ထင်တယ်နော်..
၃၃ နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ် …
သတင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ ဒီလင့်ကလေးကနေကြည့်နိုင်ပါတယ် ။
saya myo aw aw says:
that’s good…more and more..cheers
biography လေးပါ တင်ပေးပါဦး
ဒီထဲက ဘယ်သူများဒီလိုထိုးထားသလဲ သိချင်လို့
မင်းတို့ပရိယာယ်ဆိုတာ ကောက်ကျစ်တဲ့ဘက်မှာသာကောင်းတာပါ။ ကိုယ့်အတွက်၊ လူနည်းစုအတွက်ဆိုရင် အင်မတန်မှကောင်း၊
အများတွက်၊ အားလုံးအတွက်ဆိုရင်တော့ ခွေးအကြီးလှည်းနင်းတာကမှ အသံလေးထွက်လာမယ်…. ဘာမှထွက်မလာဘူး၊
ဥပမာကွာ… တိုင်းပြည်ရဲ့ ပညာရေးစနစ်၊ ကျမ်းမာရေးစနစ်.. ၁၉၆၀မတိုင်မှီကာလနဲ့ ၁၉၉၀လွန်ကာလတွေကိုနှိုင်းကြည်ပါလား (နှိုင်းနိုင်ဘို knowledge မရှိရင်တော့ sorry ပါ)။ အားလုံးက အရည်အချင်းမှ အရေအတွက်ဆီသို့ ဘာကြောင့်မှန်းမသိဦးတည်နေကြတာလေ။
Central dictating system make our country worse day by day
Bull shit သားမောင်စစ်သည်။
What does it mean by giving yourself this name?
အားလုံးက မင်ဂလာရှိလွန်းလို့ ဝမ်းသာကြည်နူး မျက်ရည်များတောင်လည်မိနေတုန်း။
ဗျုံးဆို ခင်ဗျားကိုယ်ခင်ဗျားအရှက်တရားမရှိ ရာရာစစ တိုင်းပြည်ကျေးဇူးရှင်လို့ဆိုလို့ဆို၊
ကျနော်တို့ချစ်တဲ့အမေစုနဲ့ကိုထိန်လင်းကိုလဲ ဒီ web site မှာစော်ကားမော်ကားလုပ်လိုလုပ်၊
GO TO HELL ဘဲ။
အမေ့ အိမ်မက်တွေ တခုပြီးတခု အောင်မြင်လာ နေပြီ
အဝေးရောက်သား တွေလဲ အမိမြန်မာပြည်ထဲက အမေ့ရင်ခွင်ကို ခိုလှုံချင်လှပြီအမေရယ်
ဟာ ပွဲကြီးဘဲဗျို့ 
ငါအခုဒီဆိုက်မှာ ဘာပက်စ်ဝါ့ထ်နဲ့ မန်ဘာဝင်ထားတယ်ဆိုတာပြောကြည့်စမ်း
မင်းဟာ ငါ့အဖေပါလို့ မပြောသွားတာကိုပါ
တွေ့ ရတာအတိုင်းအဆမရှိဝမ်းသာလိုက်တာ ကိုကြီးထိန်ဝင်းက တရုတ်အက်ရှင်မင်းသားချောင်ယွန်ဖတ် နဲ့တူတယ်နော်
မိဘ နဲ့ သားသမီး နှစ်အတန်ကြာကွဲကွာပြီးခါမှ ပြန်တွေ့ ကြတာ အလွန်မင်္ဂလာရှိလိုက်ပါပေ့ဗျာ.. အမေစု အတွက်လည်းအရမ်း ဝမ်းသာပါတယ်.. ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့ ရေ ကြားဖူးတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်.. ခွေးဟောင်တိုင်း ထ ကြည့်ရင် ည အိပ်ရေးပျက်တယ်တဲ့.. ဒီအတိုင်းဘဲ ခွေးသားငမောင် ဘာ Comment ပေးပေး Like or Dislike မှာရော၊ သူ့ အတွက် တုံ့ ပြန် Comment ရော ဘာမှ မပေးကြရင်ကောင်းမယ်.. ကိုယ်တွေမှာ Post နဲ့ ပါတ်သက်တာ Comment ပေးမယ်လုပ်လိုက်..ဒီခွေးသားနှောင့်ယှက်လိုက်နဲ့ .. ဖြစ်နိုင်ရင်ဥပေက္ခာသာပြုထားလိုက်ကြပေတော့
ဟုတ်ကဲ့ ကိုထ်ိန်လင်းရဲ့ အသက်က ဆူး နဲ့weiwei တို့ ထက် တစ်နှစ်ဘဲ ကြီးတာကြောင့် ၃၃ နှစ်ပါ..
မကြေညာနဲ့.. ဆူး အသက်ငယ်သေးတယ်။ ၈၈ တုန်းက မူကြို တက်တဲ့ ကျောင်းသူလေးဘဲ ရှိသေးတယ်။
မဝေ ကတော့ ၃၃ နှစ် ထက်ပိုတယ်။ မကြောဝူးနော်.. ဘယ်လောက်လဲ ဆိုတာ.. ပြောမိရင်.. ကွန်မန်းဖတ်ရင်း ဒေါပွပြီး.. လက်ထဲ အဆင်သင့်ရှိတဲ့ မောက်စ်နဲ့ ထုလို့ မော်နီတာ ကွဲသွားမှာ စိုးလို့.. ဟီးဟီး..
ကြည့်ပါအုံး … သားအမိနှစ်ယောက်ရဲ. အတိုင်းမရှိကြည်နုးနေတဲ့ မျက်နှာလေးတွေ။ အမေစုလို စိတ်ဓတ်ကြံခိုင်တဲ့ သူတောင် မျက်ရည်ကျမိတရ်။ သူဘယ်လောက်ထိ သူ.သားမြေးတွေကို တွေ.ချင်နေလိုက်မလဲ။ အဲဒါတွေကိုမြိုသိပ်ပီး နေနေတာ အရမ်းသနားဖို.ကောင်းတရ်။ အမေစုနဲ. ထပ်တူထပ်မျှ အဟုတ်ရင်တောင် အမေစုနီးနီး လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ၀မ်းသာပိတိဖြစ်ရပါတရ်။
ကိုထိန်လင်းကို စစ်အစိုးရက ဗီဇာ ၁လ ပေးထားသည်ဟု သိရသည်။ ၎င်း မြန်မာပြည်တွင် နေစဉ်အချိန်အတွင်း ပဉ္ဇင်း တက်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်းလည်း သိရသည်။